Sida Geed Caleen Loo: Ashqaraarkii Eekeeyaha - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Suugaanta Heeso Somali Sida Geed Caleen Loo: Ashqaraarkii Eekeeyaha
Sida Geed Caleen Loo: Ashqaraarkii Eekeeyaha
Yaraantaydii aroor kasta waxaan dhagta u raaricin jirey codad macaan oo ka bixi jirey raadiyowga aabbahay. Ma aan kasayn waxay yihiin codadkaasi, se waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh, naftuna ay ku xasilayso. Waxaan ku himiloon jirey, yaa sida Aabbo mar uun ku fahansiiya codadkan macaanka badan. Gadaal ayaan ka ogaaday in ay ahaayeen codadkaasi luuqda Quraanka ee Cabdibaasid Cabdisamad, eedaanka iyo nashiidooyin uu aabbo ka dhagaysan jiray idaacadaha Carabta.
Laba tobanley kadib isla goobtii hore oo ah deegaankii xudduntaydu taalay, ee sudda Waabqurux¹, waxaan mar kale si xiise leh u sugi jirey barmaamijka “Subax Wanaagsan” oo isla raadiyawgii Aabbo aan marti u ahaa. Markan se codadku codadkii way iiga duwanaayeen, oo dhadhan aan kasayo ayay ii samaynayeen. Waxan subaxdii ka dhagaysan jiray kaalmaha suugaanta. Heesaha dhextaalka u ah barmaamijka ayaan ku sawirnaa!Horta kaalay, heestani iyadu si maalinle ah ayay u soo gashaa, ee ma dookha dadka oo dhan ayay qabsatay? Maya e, malaha Khadar Maxamed Cakulle ayaa si gaar ah u jecel! Waar ma aha, Abiib Iimaan Xasan ayaa ay qalbigiisa hantiday! oo adigaba soo tan ku maanqaadday, ee aad ku wardiyayso. La isku raac amakaagnimada heestan.
Heesba ma aha ee waa heeso. “Sida geed caleen loo” waa ashqaraarkii eekeeyaha iyo yaabka ammaantii naxariista dunida –haweenka..Magaca: Sida geed caleen looMidhaha: Axmed Saleebaan BiddeQaadista: Maxamed Axmed KulucLaxanka: Maxamed A. Kuluc (?)Godka: JiiftoMaalin aanu halabuur kale ka doodaynay cusboonaysiinta suugaanta, waxaan ku idhi hummaaggaynta ammaan dumar, ee loo eekeysiiyo quruxda dhirta iyo gammaanka kadib heesta “Sida geed caleenloo” wixii ka dambeeyaa waa “galsho dhurasho” iyo “cajalraac” ee wax nuxur leh oo lagu soo kordhin karo ma garanayo. Waxaan tilmaamayay qotodheerida, mugweynida iyo farshaxanka ku xardhan heestan.
1.”Sidii geed, geeduhu kala ayaan roone, ku yaalla jeex webi iyo gal irmaan oo aan abidkii gudhayn; oo inta uu durdurka xididdada gashaday, xareedda ka haagay, oo man iyo magool cagaar ah ku hagoogtay, caleentii laamihiisuna ay faraqa dhulka la gaadhay. Geedkaas oo soo daayay ubax, ubaxiina hoobaan inta uu noqday, uu rucub rucub laamaha uga laalaado; oo gu’ iyo jiilaalba cagaaran ayaad la jaad tahay.”Sida geed caleen looUbax guud ka qariyooOoy gooni laamahaAy midiba geesteedHoobaan is gaadhiyoGuntin midha ah leedahayOo soo gandoodooGalka faraqa soo darayOo godan barwaaqaaDurdur aan go’ayniyoGacan webi ku yaallooOon gu iyo jiilaalMidab guurin baad tahay.
2.‘’Waxaad la qurux tahay sida gammaan faras. Maya e, sida sange aad loo xannaaneeyay, oo jarabar iyo jicsinba loo dhameeyay. Sangahaas oo aan bayhoof iyo balanbal abaareed iyo mid dagaal toona wali arag. Oo Soddon beri miranayay bur caws ah oo biyo u dhaw; oo hilibkii isa simay sararta, gaadada iyo guud ahaan jidhka; oo baruur darteed la socon waayay, quruxna la gaatinaya, oo hadba loo aag gediyo daaqa, sidii halo dhalay labada galin’’Sidaad tahay gammaan farasSange geesi daaqsadayOo uu garduur miraySoddon bil iyo gawdeedUu goobay farowgiiSararta iyo gaadadaOo galangalcoobooCududuhu gamuurmeenOo galaba loo raroSida ramad gu’yaal dhalayHadba kaynta geeda leOon guluf colaadiyoWeli socoto dheer gelin.
3.“Waxaad la qurux, midab iyo anfac tahay sida Guban oo barwaaqo ah, doogguna siman yahay; ama Hawd barisamaad ah oo geedgaabka iyo cawska inba dhinac u jiifsadeen, dharabka iyo dhalaalka dhirtana aad barqadii la ashqaraarayso. Maya e, intaaba waad ka bilicsan tahay, oo waxa aad la mid tahay, harooyinkii ciideed oo biyuhu dacalka ka jiifaan, shimburuhuna ka cabbayaan iyaga oo raxan raxan ah; hareeraheeduna ay cagaar yihiin xilli kasta.’’Sida gubanka qaarkiiDhul gargoorku siman yahay,Ama maadh galdhiidhooGubatiyo ku taal HawdOo laba gardhoobooBadhba gees u seexdeen,[Iyo] dharabka geedahaQuruxdooda gaarka ahAma haro gingimanooGuud ka xarfanaysooShinbiruhu ka giigeenOon gu’ iyo jiilaalMidab guurin baad tahay.
4. “Haddaba inantaadan ashqaraarka iyo quruxdaa lihi, daymadaada oo qudha ayaa igu dhalisa kalgacal aan tagayn; guntin jacayl ayaanad ii xidhay. Wax se intaaba igaga daran in aanan aqoon halka aad i gaadhsiin doonto: helis ama waayitaan.”Gabadhyahay kalgacal baadGoortaan ku eegabaQalbigayga gelisaaWax se aanan garanaynIi gunuday caashaqeHalka aad i gaadhsiin.
1. Waab Qurux: Agagaarka Balligubadle.
Qormadan waxaan hore ugu baahiyay Geeska Afrika. (Tifaftirid)
Previous articleDawlada Mauritania waxaa loo magacaabay ra’iisul wasaare cusub kadib markii kii hore iyo golihiisii iscasilay
Next articleMid ka tirsanaan jirey sirdoonka sucuudiga ayaa ku eedeeyey Maxamed Bin Salmaan (MBS) inuu u soo diray koox khaarajisa.